Digger EA - Best Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaFree Forex EAsDigger EA
Digger EA kusekelwe khono intengo sithuthele endaweni isiqondiso esithile phakathi nosuku nezikhathi oluyingozi kakhulu. I backtest ubelokhu efundelwa kusuka 2009.
The Forex Expert Advisor ibala ivolumu yokuma ngokusekelwe esimweni semakethe. I-robot yokuhweba ingasebenzisa kuze kufike ku-4 isilinganiso. I-EA ayisebenzisi i-StopLoss.
Le-EA ingasebenza ngezindlela ezimbili:
Imodi yokulondoloza (I-ConservativeMode = yeqiniso). Kulo modi, i-DiggerEA ayisebenzisi isilinganiso \_ grid \_ martingale MM. I-robot yokuhweba isebenzisa ukuyeka ukuyeka kanye nokuyeka isikhathi ukulawula ingozi.
Imodi enolaka (ConservativeMode = amanga). Kulo modi, i-robot yokuhweba ingasebenzisa kuze kufike ku-4 isilinganiso. I-EA ayisebenzisi ukulahleka kokuyeka.
I-Digger EA - Ukuqapha Nge-inthanethi
Isikhathi - I-M15. Amabhangqa emali: I-EURUSD, i-GBPUSD, i-USDCAD, i-NZDUSD. I EA kungaba backtested by imigoqo noma zonke umkhaza.
I-Digger EA - Amapharamitha
StartLots - qala usayizi wezinhlamvu. Leli qembu lokuqala lokuvula ukuhweba. Kungashintshwa yi-EA ngokusekelwe esimweni semakethe, kodwa hhayi ngaphezu kokuphindwe kabili.
UseMM_Balance - inani lokufaka imali yediphozi. Uma lolu khetho lubekwe (okungukuthi oluhlukile ku-0), khona-ke inani lokuqala libalwe ngayinye ingxenye ye-UseMM_Balance of deposit. Uma isethwe ku-0, khona-ke inani lokuqala lihleliwe futhi lilingana ne-StartLots. Isibonelo, uma i-StartLots = 0.1 ne-UseMM_Balance = 300, uma idiphozi i-300, i-EA izovula umyalo we-0.1 lot, uma idiphozi yi-600 - 0.2 lot, uma idiphozi yi-900 - 0.3 lot, njll Le parameter kuyadingeka ukuze kuvuselelwe kabusha.
I-StartLots% Depo - inani lokuqala lokwama-%. Uma kungenjalo, isamba sokuqala sibalwa njenge% lemali yokufaka idiphozi, i-StartLots ne-UseMM_Balance ayinaki. Uma i-zero, i-EA izosebenza ne-StartLots ne-UseMM_Balance.
TakeProfitPip - inzuzo yenzuzo kuma-pips (izingcaphuno zama-4) njengemali evulekile yokuhweba.
I-TrailingStopPip - ukumisa okulandelanayo ngamapayipi.
StepPip - Isinyathelo isilinganiso in Pips.
StepAutoAdjust - ukulungisa ngokuzenzakalelayo kwesinyathelo sokulinganisela. Uma StepAutoAdjust = yeqiniso, khona-ke inani lentengo lizolungiswa ngokuzenzakalela yi-EA ngokusekelwe kokungabi nhlobo kwe-intraday neyansuku zonke
I-SpreadFilterPip - usakaze isihlungi kuma-pips. Uma ukusakazeka kungaphezu kwalokhu kunenani, isignali izobe inganakwa.
Imodi Yokuqikelela - if weqiniso, i-EA ngeke isetshenziselwe ukusebenzisa izinto zokubala kanye nezici ze-martingale \_ grid. I-DiggerEA izohweba kuphela izimo ezijabulisayo futhi izolawula ingozi ngokusebenzisa ukuyeka ukuyeka (StopLossPip) kanye nokuyeka isikhathi (TimeStop).
I-PchFilter - if weqiniso, i-DiggerEA izosebenzisa isihlungi esekelwe endaweni yamanani entabeni ye-intraday yokuhweba. I-ConservativeMode = yeqiniso kuphela.
SignalBarSize% ATR - ubukhulu bomzimba wesibonakaliso. I-ConservativeMode = yeqiniso kuphela.
I-WickSize% - usayizi wesithunzi (phezulu \_ okuphansi ukuthenga \_ ukuthengisa) webha yesaziso. I-ConservativeMode = yeqiniso kuphela.
IsikhathiStop - izinombolo ezithile zemigoqo emva kwalokho okuzovalwa khona uma ukuhweba kungafinyeleli ukuthatha inzuzo noma ukuyeka ukulahleka.
Ukuyeka ukuyeka ubuchwepheshe. Uma ukuyeka ukuyeka kuvela, yonke imiyalo izovalwa nge-EA. Uma isethwe ku-0, ukulahleka kokuyeka kukhutshaziwe.
StopLossPip - Misa ukulahleka ku-pips kusuka ngentengo yokungena. The StopLossPip kufanele kube ne-ConservativeMode = yeqiniso.
I-StopOutLevel% - i-akhawunti yemaki ye-akhawunti ngo-%, lapho i-EA izovala zonke izikhundla zokuhweba.
EquityStopLoss% - Amaphesenti ukusuka ukulingana kokuqala. Uma ukulingana kwamanje kwehlela ngezansi kwe-EquityStopLoss%, i-EA izovala yonke imisebenzi.
OkuphambiliLevel= 0… 10. Uma abeluleki abaningi bethola izibonakaliso zokuvula isikhundla esisha ngasikhathi sinye, lesi sikhundla sizovulwa yi-EA ngePremierLevel ephakeme (i-0 - okuyiyona ebaluleke kakhulu).
MagicNumber - Inombolo eyingqayizivele yama-oda we-EA. Ukuhweba amathuluzi amaningi, kufanele uvule amashadi ahlukile ngamabili wemali edingekayo bese unamathisela i-EA kuwo ngamunye. Kulokhu, ama-MagicNumbers awo wonke ama-DiggerEA kumele afane. Ukunciphisa ubungozi, yi-EA eyodwa kuphela engavula ukuhweba ngesikhathi. Isibonelo, uma iDiggerEA eyodwa ithola isiginali yokuvula ngenkathi enye iDiggerEA isivele ivule isikhundla, isiginali ngeke isanakwa futhi isikhundla esisha ngeke savulwa.
ID - Isikhombi esiyingqayizivele se-EA. Isetshenziselwe ukulawula okungcono kwama-oda lapho kugijima ama-EA wami amaningana (njenge-Digger, Miracle) ene-MagicNumber efanayo.
Digger EA - Imininingwane eyengeziwe
Idiphozi encane - $ 200.
lot Minimum - 0.01.
Isisekelo esincane - 1: 100, inani eliphakeme liyanconywa.
Izinhlobo eziphakanyisiwe zama-akhawunti - i-NDD ne-ECN.
I EA akudingi nokwenza.